Al-Shabaab oo sheegtay in ciidamo katirsan DFS ay isku-soo dhiibeen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo sheegtay in ciidamo katirsan DFS ay isku-soo dhiibeen
Al-Shabaab oo sheegtay in 60 askari oo katirsan dowlada federaalka Soomaaliya ay isku-soo dhiibeen.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab ayaa kusoo bandhigtay deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud niman ay ku sheegtay ciidamo dowlada federaalka Soomaaliya katirsan oo isku-soo dhiibay kooxda Al-Shabaab, sida uu sheegay sarkaal Al-Shabaab ah.
Guddoomiyaha ururka Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Galgaduud, Xasan Yacquub Cali ayaa sheegay in ciidamo katirsan dowlada federaalka Soomaaliya ay isku-soo dhiibeen kooxda.
Xasan Yaxquub Cali ayaa xusay in ciidamada ay tiradoodu tahay 60 askari.
Wali saraakiisha dowlada federaalka Soomaaliya kama aysan hadlin sheegashada Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa u dagaalamysa sidii ay awooda uga tuuri lahayd dowlada federaalka Soomaaliya, ayna dalka Soomaaliya uga samayn lahayd dowlad Islaami ah oo iyadu maamusho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Odayaasha dhaqanka ee deegaanka Mandheera ayaa Soomaaliya u yimid si ay wadaxaajood ula yeeshaan dhiggooda Soomaaliya si loo sii daayo dhakhaatiir u dhashay dalka Cuba oo ay afduubteen maleeshiyada Al-Shabaab. Sida uu ku [...]